Wasaaradda Beeraha Soomaaliya oo Muqdisho ka furtay shirka wadatashiga horumarinta siyaasadda iskaashatooyinka Beeraleyda Soomaaliyeed “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Shirka wadatashiga horumarinta Siyaasadda iskaashatooyinka Beeraleyda Soomaaliyeed oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiinta Wasaaradda Beeraha, xubno ka socday iskaashatooyinka Beeraleyda Soomaaliyeed iyo qubaro ku xeel dheer dhanka Beeraha.
Kulanka ayaa lagu falanqeeyay u jeeddada laga leeyahay dejinta siyaasadda lagu horumarinayo iskaashatada Beeraleyda Soomaaliyeed, iyadoo dhinaca kale ay ka qeyb galayaashu is weydaarsadeyn doodo iyo fikrado ku saabsan wax ka badalka iyo wax ku daridda sharcigan, xoojinta wada shaqeynta iyo horumarinta wax soo saarka dalka.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Soomaaliya Mudane Xaamud Cali Xasan oo shirka daahfuray ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta Wasaaradda beeraha iyo iskaashatooyinka beeraleyda Soomaliyeed oo uu tilmaamay inay dalka muhiim u yihiin.
Maxamuud Abiikar oo ku hadlay magaca iskaashatooyinka Beeraleyda Soomaaliyeed ayaa sheegay inay sharcigan akhrin doonaan, isla markaana ay u kuurgeli doonaan waxyaabaha wax ka badalka u baahan iyo haddii ay jiraan qodobo u baahan in lagu daro sharcigan.
Professor Yaxye Yuusuf Xaaji oo ah qoraaga sharcigan ayaa sheegay in siyaasadda iskaashatada Beeraleyda Soomaaliyeed ay faa’iido weyn u leedahay dalka, maadaama ay muhiim u tahay wax soo saarka Beeraha iyo in la gaaro isku filnaansho dhanka cuntada ah oo dhameystiran.